Xildhibaano ka tirsan Puntland oo lagu soo Dhaweeyay Sanaag – Radio Daljir
Xildhibaano ka tirsan Puntland oo lagu soo Dhaweeyay Sanaag
Diseembar 26, 2015 7:15 b 0
Sabti, December 26, 2015 (Daljir) —Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Puntland ayaa gaaray gobolka Sanaag waxaana halkaas kusoo dhaweeyey maamulka gobolka iyo qaarkamid ah shacabka gobolka.
Golaha wakiilada ayaa booqday degmada Baran ee gobolka waxayna booqdeen meelo kamid ah magaalada,waxana ay bulshada ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan nabadgalyada.
Meelaha ay booqdeen waxaa kamida ah Saldhiga magaalada oo qabyo ah xarumaha ciidamada,waxayna sheegeen in warbixinada ay helaan horgayn doonaan markuu furmo Kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo hada fasax ah.
Fasax Baarlamaanka Puntland ay galaan waxay booqdaan deegaanada ay kasoo jeedaan si ay usoo in dho indheeyaan xaalada iyo baahiyaha ay qabaan dadka ay matalaan.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Sabti_26